အသုပ်ဝတ်ခြင်း နှင့် Mayonnaise Mayonnaise နှင့် အသုပ်ဆော့စ်ကို နိဒါန်းပျိုးခြင်းသည် အနောက်တိုင်းအစားအစာများတွင် အသုံးများသော ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များဖြစ်ပြီး ဟင်းခတ်ဆော့စ်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။Semi-solid state တစ်ခုဖြစ်သည်။ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီကနေလုပ်တယ်။ကြက်ဥ၊ ဆား၊ သကြား၊ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များ၊ ရှာလကာရည်၊ emulsifying thickener စသည်တို့ ကွာခြားချက်...
Zhitong စက်ပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်လက်မှတ်အား နွေးထွေးစွာ ဂုဏ်ပြုပါသည်။
Zhitong Machinery ၏ မူပိုင်ခွင့်လက်မှတ်အတွက် ဂုဏ်ယူပါသည်။2021 ခုနှစ် ဇူလိုင်လ 1 ရက်နေ့တွင်၊ zhitong Machinery သည် အောက်ပါဆော့ဖ်ဝဲမူပိုင်ခွင့်လက်မှတ်သုံးခုကို ပေးအပ်ခဲ့သည်- 1. Intelligent vacuum emulsifier control system software.2. Intelligent vacuum emulsifier control s...
cosmetic cream mixer machine workshop ဆိုဒ်စုံ တပ်ဆင်ပါ။
Xiangyi Herbal သည် တရုတ်နိုင်ငံရှိ အဓိကပြည်တွင်းအလှကုန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။Xiangyi Herbal သည် အရေပြားအရောင်နှင့် အရေပြားပြဿနာများအတွက် TCM ထုတ်ကုန်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအပေါ် အာရုံစိုက်သည်။Shanghai Univer နှင့် ပူးပေါင်း သုတေသနပြု တီထွင်မှုတွင် တရုတ်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ တီထွင်မှု မူပိုင်ခွင့် ၁၆ ခု ရရှိထားသည်။